What programming language should be learned first ? | Saturngod
What programming language should be learned first ?
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in Knowledgebase and tagged C++, learn, programming on March 20, 2010 by saturngod. Post navigation
← Testing Zawgyi Contact on iPhone Simulator
Web Route 1.1.5 →
13 thoughts on “What programming language should be learned first ?” မင်း March 20, 2010 at 12:29 pm အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခုလိုအသိညဏ်များကိုအမြဲတမ်းမျှဝေနိုင်ပါစေ
Reply ↓ ကိုဇေ March 21, 2010 at 6:02 pm ကျွန်တော် က ကိုsaturngod ရဲ့ အမြဲတမ်း ပရိတ်သတ်ပါ၊
Reply ↓ soe soe March 22, 2010 at 12:25 am programing နဲ့ developing က တူပါသလား။ မတူဘူးဆိုရင် ဘာတွေကွာခြားသလဲ ဆိုတာလဲ အချိန်ရရင် ရေးပြစေချင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရေးပြီးသားရှိရင်လဲ ဖတ်လို့၇မယ့်လင့်ခ်လေးပေါ့..။
System ဆိုတာကရော အပေါ်က ၂ ခုနဲ့ အတူတူပဲလား။ လေးစားခင်မင်စွာ
Reply ↓ saturngod Post authorMarch 22, 2010 at 12:51 am http://www.saturngod.net/knowledgebase/developer-vs-programmer
အဲမှာ ရေးထားပြီးသားပါ။ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ ပေးထားတဲ့ link မှာ အကျယ်တဝင့် ဆွေးနွေးထားတာတွေ ရှိပါတယ်။
Reply ↓ mm March 23, 2010 at 11:21 am download ->> C ++ (ဦးအောင်မြင့်) (Vol 1+2+3)
Reply ↓ winbalamin January 17, 2011 at 7:53 pm ဦးအောင်မြင့် ရဲ့စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲလုပ်တာ compline လုပ်လို့မရဘူး windows7မှာဘယ်လို complier သုံးရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးပါဦး။
Reply ↓ saturngod Post authorJanuary 17, 2011 at 11:48 pm i don’t know … why you don’t give me some error message ? Recommend to ask in http://www.mysteryzillion.org. it have some C++ leaner and master
Reply ↓ zaw aung March 23, 2010 at 5:53 pm thanks!i want to copy to my website!plx allow me!u may be happy!
Reply ↓ saturngod Post authorMarch 23, 2010 at 6:02 pm Please, giveacredit link.
Reply ↓ roman March 24, 2010 at 3:22 am အကိုရေ .. ကျွန်တော် အခု C ကို သင်နေပါတယ် .. C ကနေဆိုရင်ရော C++ ကို ကူးပြောင်းဖို့ လွယ်ရဲ့လား .. သူတို့ နှစ်ခုကတော့ အခြေခံကလေးတွေ တော့တူမယ်ထင်တယ်နော် ..
Reply ↓ saturngod Post authorMarch 24, 2010 at 3:43 am C is sthe first version and C++ is next version. Don’t worry about that. C doesn’t have great OOP. C++ have it.
Reply ↓ roman March 25, 2010 at 1:44 am ဟုတ်ကဲ့ ကို စေတန်ရေ .. အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
Reply ↓ သံယောဇဉ်မင်း March 25, 2010 at 11:44 pm လာဖတ်သွားပါတယ်
မသိတိုင်းသာမေးလို့ရလျှင် လူတိုင်း လေ့လာကြိုးစား တီထွင်စိတ်ပျောက်ကုန်မည်။ — saturngod Job VacancyWe want IT TechnicianWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently) Tweets by @saturngod